SIDEE LOO SAMEEYAA KHAMRI SAAFI MADOW - CURRANT
Khamriga ugu wanaagsan - waa la kariyaa gacmihiisa.
Mid ka mid ah nooca ugu caansan ee cabitaanka khamriga waa madow madow.
Ka dib markaad akhrido maqaalkan, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo khamri siriyaal ah.
Black Currant Wine: Liiska Maaddooyinka
Cabbitaanka cabitaanka khamriga guriga lagu cabbo waa nidaam adag oo dalbanaya. Aad ayey muhiim u tahay inaad si habboon u diyaargareyso dhammaan waxyaabaha maaddadaas ah.
biyo nadiif ah;
Waa muhiim! Si looga hortago faddarinta walxaha khamriga leh sheyga waxyeelada leh, waa lagama maarmaan ku shub biyo karkaraya si fiicanna u qalalan dhammaan weelasha loo isticmaalo geedi socodka cabitaanka.
Celcelis ahaan, baaldi 10-litir oo berry ah ayaa ku siin kara 1 litir oo casiir ah. On dhalada 20 litir, isticmaalka celcelis ahaan waa 3 kg of berry.
Sida loo doorto miraha khamriga guryaha
Si aad u hesho cabitaan dhadhan fiican leh oo tayo sare leh, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo xulo berry ah. Si taxaddar leh uga saar midhaha qallalan ee aan qaangaarka aheyn. Berry, sharafnimada taas oo jaban, sidoo kale maaha mid ku habboon diyaarinta cabitaanka khamriga. Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro burburka yaryar iyo laanta yar yar.
Maydhista Waa in la sameeyaa oo kaliya haddii ay leedahay qashin xoog leh. Haddii ay berry leeyihiin hufnaanta ku filan, waxay yihiin pre-burees iyo keeneen a jelly-sida gobolka.
Markaad sameysid khamri lacag madow ah guriga, waa muhiim inaad raacdo tilmaamaha tallaabo tallaabo tallaabo ah. Kaliya adeecid adag oo ku saabsan dhammaan talooyinka waxay heli karaan cabitaan macaan.
Taageerayaasha winemaking ee guriga ayaa xiiso leh inay wax ka akhriyaan diyaarinta khamriga "Isabella".
Tallaabada ugu horreysa waa inaad bilowdo inaad bilowdo. Raspberry, strawberries, canab ama sabiib waa ku haboon tahay. Berrygu wuxuu noqon doonaa saldhig u fiican khamriga mustaqbalka. Biyo ay ku dhaqaan biyo lama fulin karo, maadaama ay tani burburin karto ama ku maydhin karto bakteeriyada khamriga. 200 g oo ah nooca berry waa in lagu dhejiyaa weel dhalada ah, ku dar nus koob oo sonkor ah iyo 1 litir oo biyo ah. Qoorta waa in lagu shaabadeeyaa suuf ama faashad faashad leh, ka dibna dhalada ku dhaaf meel diiran. Heerkulka waa inaanay ka hooseyn 22 ° S. Ka dib qiyaastii 10 cisho, massku wuxuu bilaabi doonaa halsano - taasi waxay muujinaysaa diyaargarowga khamiirka. Si aad u diyaariso 10 litir oo khamri ah oo madow ah, waxaad u baahan doontaa hal koob iyo badh koob oo cows ah.
Ma taqaanaa? Waqtiyadii hore, currant madow waxay leeyihiin magac labaad - "berrito". Waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in geedkii la koray ku dhowaad dhammaan muwaadiniinta. Racfaanka wuxuu isticmaalaa berri ma'aha oo kaliya isticmaalka aadanaha, laakiin sidoo kale diyaarinta daawooyinka daweynta.
Marxaladda soo socota waxay diyaarinaysaa saxarada. Isticmaal qeybtan soo socota: 1 kg oo ah miro la jarjaray 1 koob oo biyo ah. Si aad u hesho isku dar ah, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro miraha saafiga ah ee currants biyo diirran. Sourdough ayaa lagu daraa isku-dar ah iyo weelku wuxuu buuxsamaa saddex meelood. Qoorta waa in lagu xiraa maro oo markabka uga baxaa meel kulul ilaa 3-4 maalmood. Inta lagu jiro wakhtigan, habka halsano waa in la hawlgalaa. Si aan u kallifin saxarka, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u walaaqdo - ugu yaraan 2-3 jeer maalintii.
Cabbitaanka soo dhalaalay waa in la gooyaa ama faashad lagu shubo weelka si fiican loo dhaqay laga bilaabo galaaska, waxaa wanaagsan in la duubo oo la leexiyo biyo la nadiifiyey. Ka dib marka isku dar ah waa la kiciyaa oo mar kale soo baxa. Liquid, kaas oo la sameeyay ka dib markii cadaadinaya, wuxuu leeyahay magaca "wort". Waxay lagama maarmaan u tahay tallaabooyinka soo socda.
Khamriga guriga dhexdiisa waxaa laga sameyn karaa miraha iyo miro badan: tufaax, raspberries, yoshta, chokeberry.
Si loo gooyo dhererka si habboon, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo heerkulka joogtada ah ee saxda ah - qiyaastii 23 ° S. Haddii uu tilmaamuhu hooseeyo, waxaa jira halis ah in hargabku uusan dhicin, oo haddii uu ka sarreeyo, cabitaanku waa uu dhali doonaa, isla markaana awoodda lagama maarmaanka ah lama gaari doono.
Waa muhiim! Ha ku darin khamiir ilaa bilowga - waxay horey u joogaan beeraha. Sababtoo ah qaddarkooda xad-dhaafka ah, waxay awoodaan, oo ma awoodi doonaan inaad hesho cabitaan dhadhan fiican leh.
Isku darka laga helo jooniska, sonkorta biyaha iyo granulated waa la qaataa, weelku wuxuu buuxiyaa saddex meelood. Farqiga noocan oo kale ahi waa lagama maarmaan u ah dhismaha bacda biyaha, taas oo ka hortagi doonta in hawada lagu dhex daro khamriga. Haddii ay taasi dhacdo, cabitaanku wuxuu u eg yahay khalka si uu u dhadhamo. Si hannaanka halsano ma joojin, waa inaad marmar ku dartaa isku dar ah sonkorta. Tan waxaa badanaa la sameeyaa 2-3 maalmood (100 g oo ah sonkorta granulated ayaa lagu daraa litir kasta oo ka mid ah wort), ka dibna todobaadkii. Waqtigaan, si taxadar leh u fiirso sida gaasku uga soo baxayo tuubada, kaas oo lagu qasi karo weel biyo ah.
Caadi ahaan waa inay noqdaan 1 xabbo oo ah 20 daqiiqo. Caano-celintu waxay qaadan kartaa 20-30 maalmood. Si aad cabitaanka u cabto kaarar badan, waxaad u baahan tahay inaad joojiso halsano horeyna u sii gudub wareegga xiga ee khamriga. Haddii aad qorsheyneyso inaad hesho cabitaan aan kaarar ahayn, waa lagama maarmaan in hannaanka halsano uu si madaxbanaan u dhammaystirmo.
Baro sida loo sameeyo khudradda caaga ah ee macaan iyo macaanka.
Raashinka fudud ee khamriga madow, ka dib dhammaan talooyinka, waxay keeni karaan cabitaan aad u dhadhan fiican leh.
Mid ka mid ah marxaladaha xiisaha iyo muhiimka ah waa cadeynta cabitaanka. Si arrintan loo sameeyo, khamrigu wuxuu hoos u dhacayaa maqaarka ama bidixda qaboojiyaha 3-4 maalmood.
Loo baahan yahay si loo ilaaliyo ka danbeeya habka isbedelka midabka. Marka aad go'aansato in cabitaanka uu helay midabka la rabay, waa inaad kala soocataa khamriga dhamaystiran ee ka yimaada tuubada adigoo ku dhajinaya tuubbo dhuuban oo dhuuban si aad u nadiifisid weel qallalan. Taas ka dib, marinka biyaha ayaa mar kale la go'aaminayaa, dhalada ayaa lagu meeleeyaa meel qaboow ah. Calaamadda heerkulka hawadu waa inaanay ka badanayn 10 ° S. Ka dib markaad dejisid dhagxaanta waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo sifeyn.
Marxaladda ugu dambeysa, khamrigu waa dhalo. Si tan loo sameeyo, waxaad isticmaashaa dhalooyin quraarad ah, kuwaas oo si taxadar leh loo xiray oo looga tagay meel qabow.
Ma taqaanaa? Waxaa loo tixgeliyaa in lagu duubo currant ay ku wanaagsan tahay gacmaha, iyada oo aan la isticmaalin qalab ama qalabka kale ee korantada. Sidaas darteed waxaad ku quudisaa tamartaada.
Shuruudaha iyo xaaladaha lagu kaydinayo khamriga
Hadda waxaad taqaanaa sida loo sameeyo khamri saafi ah oo leh cabbir fudud oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxaysatid dhadhanka asalka ah ee cabitaanka. Laakiin si ay u awoodaan in ay u dhadhamiyaan iyo waqti ka dib, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida si habboon u kaydiso. Waa muhiim inaad dhawrto dhowr cabitaanka xaaladaha kaydinta, oo aan hoos ku qeexnay.
Heerkulka hooseeya: cabitaanka cabitaanka khamriga waxaa ugu wanaagsan in heerkulkiisu hooseeyo. Haddii aad ku hayso guri dabaq ah, waxaad u baahan tahay inaad heshid meel ka fog qalabka kulaylka iyo raajada qorraxda. Waxaa ugu wanaagsan in lagu duubo dhalooyinka Maqaasi, laakiin qof kastaa ma laha xaalado noocaas ah. Heerkulka hawada ee heerkulku waa 14 ° C. Sidoo kale qolka waa in lagu hayaa qoyaan badan.
Fadhiga iftiinka qorraxda: waxaa muhiim ah in iftiinku uusan galin weelka.
Mawqifka tooska ah ee dhalooyinka: tani waa lagama maarmaan si markaa gufku si joogto ah ugu qoyan yahay khamriga. Haddii ay soo baxdo, waxaa jira halis ah in weelku ka daadanayo.
Kalsooni: waxaa muhiim ah in dhalooyinka ay wali yihiin - wax kasta oo ruxaya waxay saameyn xun ku yeelaneysaa carafka khamriga.
At guriga, berry iyo berry cranberry sameeyaan liisur delicious.
Xaaladaha saxda ah, khamriga guriga lagu cabbo wuxuu sugi karaa wakhti dheer kiiska marka la go'aamiyo inuu isku dayo. Waxaa lagu kaydin karaa qaboojiyaha ilaa 3 sano. Si kastaba ha noqotee, waqti aad u dheer ayaa keena cabitaanka cabitaanka.
Khamriga cagaaran ee madow waxaa badanaa laga sameeyaa "laf ahaantiisa", mana uusan joogin muddo dheer. Si kastaba ha ahaatee, cabitaankan, oo leh dhadhan weyn, wuxuu qurxin doonaa iid kasta.